IMitzrael; Ingelosi Egcina Umlo Olwa Ntshutshiso - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
IMitzrael; Ingelosi Egcina Umlo Olwa Ntshutshiso
UMitzrael ukhusela iiCapricorn ezizalwe phakathi kukaJanuwari 16 ukuya ku-20. Ngaba uyingelosi yakho? Funda konke malunga neempawu zakhe kunye nendlela yokumbiza apha.
UMitzrael yingelosi eyindoda ekhusela abantu abazalwe phakathi komhla we-16 nowama-20 kuJanuwari. Njengenombolo yama-60 kwiingelosi ezingama-72, umele igunya kunye nenkululeko. Ukuba wazalelwa phantsi kwempembelelo yakhe, unomoya ophilileyo, unxibelelana kakuhle kwaye ukhululekile ekuzivumeni iimpazamo zakho. I-Mitzrael idlala indima yokuthomalalisa ekusombululeni ungquzulwano kwaye yenza ukuba abantu bazive belula. Ukwakhulula abantu abatshutshiswayo kwaye ubanika imbeko kulawulo oluphezulu. Funda ngakumbi malunga neempawu zakhe apha kwaye ufumane ukuba ungalucela njani uncedo lwakhe kwaye unxibelelane naye xa kufuneka njalo.
Ingelosi engumgcini weCapricorn, iMitzrael (ukusuka nge-16 ukuya kwi-20 kaJanuwari)
Intsingiselo Uthuthuzela abacinezelweyo, IMitzrael ifuzisela inkululeko . Unceda abantu abatshutshiswayo kwaye wenza abantu abahloniphekileyo kulabo abakhuselayo. Ukwamele iqela kwaye unika induduzo enkulu ngexesha losizi kunye nokwenzakala.
Fumanisa zonke iimpawu zokukhusela ingelosi uMitzrael
Iimpawu zakhe ezilungileyo kunye namandla:
Ubukrelekrele, iMpilo, uPhiliso, uMsebenzi kunye neKarma
Iingelosi zeNtloko zithwala ulwazi
Hod oko kuthetha uzuko nobungangamsha
Micael, intloko yemikhosi yasezulwini
IAlexandrine, iAmazonite, iAmber, iCalcedony, iChrysolite, iCarnelian, iJet kunye neObsidian
* Ii-sefirots ngamagunya okudala alishumi eKabbale. Bazibonakalisa ngokwendlela yomthi waseKabbalah, apho iSefirot nganye ingamandla kaThixo uMdali.
IMitzrael yenza ukuqonda kube lula. Abo bakhuselwe yile ngelosi ingumlondolozi ke ngoko iinkokeli ezigqwesileyo enkosi kumgangatho owandileyo wokucenga. Abantu abazalelwe phantsi kwempembelelo yakhe banezinye iimpawu ezintle. Iimpawu ezintle, ingqondo ebukhali kunye noburharha obumnandi ziyinxalenye yento ebenza bagqame, kunye nokukwazi kwabo ukubona iimpazamo zabo nokuzilungisa.
UMitzrael sisithunywa esikhululayo esigcina kwingcinezelo nakwimvukelo. Unamandla amakhulu xa kuziwa ekulawuleni iingxabano nabantu obathandayo. Izinto ke ziziva zilula kuwe ngenxa yeMitzrael.
IMitzrael kunye nepentente yakhe
Kutheni ubiza uMitzrael?
Ungabiza umkhuseli wakho ngelosi uMitzrael ukuba unengxaki negunya. Ingelosi yenkululeko, ikuvumela ukuba ufumane iingxaki zakho kwaye wenze eyakho ikamva loxolo. Uyakuvumela hlala unyanisekile kwabanye nakwiziqu zakho. Ukubiza uMitzrael kuya kuba sengqiqweni xa unethemba lokuphumelela uviwo; njengengelosi ka imemori , unokukufundisa ukuba ucofe kwaye uchane.
Ingelosi kaMgcini Mitzrael ibonelela:
Ukuqonda igunya nentobelo
Intuthuzelo xa ujongene a ingxaki
Ungayibiza njani iMitzrael
Ukuba uMitzrael yingelosi yakho ekugcinayo, iintsuku zakhe kunye neeyure zokuzimisela zi-8th Matshi, 20 Meyi, 21st Meyi, 4 Agasti, 17th October ne-27 December phakathi ko-19: 40 no-20: 00.
Ukunxibelelana nengelosi yakho ekugcinayo, yitsho lo mthandazo ngesiqhumiso seMastic kunye neNutmeg:
Cacisa, Mnumzana, amajelo omzimba wam, ukuze amandla akho aphezulu ahambele ngaphakathi ngaphandle kokuhlangabezana nezithintelo.
I-Angle Mitzrael, ndivumele ukuba ndiphile ngokuhambelana namandla am aphezulu, ukuze ndenze ubungangamsha bakho obuvela kuThixo, ubulumko bakho bobuthixo, ubutyebi bakho obungcwele (ngokuziphatha, ngokomoya nangokwezinto eziphathekayo).
Ungavumeli italente yam (italente ondinika yona) ukuba inyuke ngaphezu kokunyaniseka kwam, kuba ndifuna ukwenza umzekelo.
Mitzrael, ndenze ndithembeke kwilizwe leengelosi, ukuze onke amazwi am, zonke izenzo zam, zonke iingcinga zam zibonakalise ubomi basezulwini, zizele kukukhanya novuyo.
Ingelosi yakho ekugcinayo inokuzama ukunxibelelana nawe ngamanani eNgelosi, sukulinda ukufumanisa. Funda yonke into malunga nefuthe leengelosi ezingabalindi.
I-Dragon Horoscope 2021: Unyaka woNwabiso oluTyebileyo
UMahasiah yiNgelosi yoLondolozo yoXolo kwabo baZalwe phakathi kuka-Epreli 10 ukuya ku-14
leliphi inani elimele uthando
Inani leengelosi ezi-1 kunye ne-5
Ithetha ntoni xa ubona amanani eengelosi
ezona mpawu ziqhelekileyo zodiacac
Intsingiselo yamanani eengelosi ezingama-333
ilanga lenyanga kunye nokuphuma